मधेसी नेता हरुमा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को कमी देखियो। आतंरिक अनुशासन एकता र क्रियाशीलता को कमी देखियो। आंदोलन शुरू भए देखि काठमाण्डु मा भन्दा मधेसमा गार्हो हो। तर काठमाण्डु कॉकटेल सर्किट मा व्यस्त नेतृत्व ले टाइम प्रेशर महसुस गरेको देखिएन। सबैले काठमाण्डु छोडेर १००% नाकाबंदी र हर घर दस्तखत मा जानुपर्ने भो। साढ़े तीन पहाड़ी दल को संगठन धवस्त पार्ने हो भने आजको भोलि घुँडा टेक्छ। Knock, knock, knocking on heaven's door.
न महंथ को न उपेन्द्र को काठमाण्डु मा जरुरत छ। महंथ लाई कसै ले नाकामा बस भनेको छैन। वीरगंज मा गएर आराम गर नै भनेको हो। काठमाण्डु मा भन्दा बढ़ी सुगम छ वीरगंजमा। जाड़ो पनि कम।
वार्ता मा जानु भनेको शत्रुलाई एउटा false hope दिनु मात्र हो। ११ बुँदे थपघट हुन्छ कि हुन्छ कि जस्तो किन पार्ने? आंदोलन अनावश्यक लम्बिन्छ मात्र।
बिगुल फुक दो